Ukususela kumaxesha amandulo, abantu bathi ukuzilibazisa kunqunywe ngumntu womntu. Abantu abanobuqili nabathanda ukuqokelela iimali ezahlukeneyo okanye izitampu, bahlala kuzo iiyure, bazibandakanye ngokubonakala, unyaka wokukhululwa, njl. Kodwa kunjalo-into ebaluleke kakhulu yinto ebizwa ngumfazi-ukunika ubushushu nokudala ikhaya elihle. Kwaye abafazi banamhlanje bathanda ukudala uxanduva ngezandla zabo, ngoko unokubonisa iiminqweno kunye namaphupha akhoyo. Senza uluhlu lweentlobo ezithandwa kakhulu zamantombazana, apho ungakhangela into efanelekileyo kwaye wena.
Iintlobo zezinto zokuzilibazisa.
Masiqale nge-crochet. Kanye, ixesha elidlulileyo elidlulileyo, litshintshile iintlobo zee-napkins kunye neebhola. Ngethuba langoku, ngoncedo lwesikhonkco, abantu badala iifestile ezintle, iipiliti ezintle, amathoyizi athambileyo, njl. Ukugcina i-vase ekhonjiweyo ifom, yibambe nje kwisisombululo ngoshukela, uze uyomise. Ihoyiji epholileyo kufuneka igcwaliswe nge-sintepon okanye uboya bekotoni.
Uhlobo oludumileyo lwezinto zokuzilibazisa oogogo bethu abazenzayo kwixesha labo elikhululekile. Yeka indlela enhle ngayo ukukwazi ukudibanisa! Nguwe kuphela onokugqoka abenzi bakho bezindlu njengabanye. Izinto eziziwayo zikhethekileyo. Unokubonisa ukucinga kwakho kunye neengcamango. Yiyo le nto yokuzonwabisa eya kukunceda ube ngumklami wefashini ekhaya. Kwaye akukho mntu ngaphandle kwakho ongenakukwazi ukunxiba intsapho yakho, njengawe. Ukuzibona kuyisisombululo sokuxinezeleka koxinzelelo. Xa unesikhonkco okanye inaliti esandleni sakho, ke yonke into iya kwimvelaphi. Ukwazi ukuthoba inkqubo yeentlanzi kunye nokuphuhlisa ukuhamba. Nangona kunjalo, lo msebenzi kufuneka uhambisane nokuzilolonga okusebenzayo, ukwenza imidlalo okungenani iyure ngosuku. Uyazi, jabulela umdlalo kwaye wenze abanye bavuye.
Ukudala kwamaphepha eposi.
Ukuqhubela phambili, umdlalo wokudala iposikhadi ngokwakho ufumana ukuthandwa. Oku akusiyo nje into yokuzonwabisa, kodwa yindlela efanelekileyo yokukhumbula ngokungapheliyo imingcipheko engakulibalekiyo kubahlobo abasondeleyo, kuba kuzo - into emnandi, isimo sengqondo somntu, ukunyamekela nothando. Ukuveliswa kweposikhadi, uya kufuna iimpahla ezininzi ezincedisayo: iphepha elikhuselekile, amakhadibhodi enemibala, iintlobo ezahlukeneyo zamateyiti kunye neengqungquthela, kunye nezixhobo ezinjengezikhisi ezicatshulwayo, iintlobo ezininzi zeetampu ezinamathelisi, imifanekiso ye-punchy, njl. , kodwa nephepha kubo. Kufuneka nje udibanise iifompu eziqhelekileyo zeetafile, faka i-glue kwesi sixazululo, sityhilele kwaye ulinde ixesha elincinci lonke amanzi aphuphuma. Ukuze ukhawuleze inkqubo, unokuyomisa nge-hairdryer. Ngenxa yoko, uya kufumana iimpawu ezizodwa zombala oyifunayo.
Kungekudala, ukusuka eNtshona, into yokuzonwabisa ye-albhamu yezithombe (scrapbooking) iphendulela kuthi- le yinto yobugcisa bokudibanisa ukudibanisa iikholeji zezithombe zabo. Ngexesha elifanayo kuyisizathu esihle sokwenza iirekhodi zeefoto ezikhohliweyo, kwaye ulungiselele ukuvela kwintsapho yakho okanye uhambo. Kulo mdlalo wokuzonwabisa naluphi na uhlobo oluthile lwezinto zokuhlobisa eziya kufumana. Idizayini ye-albhamu yakho yomtshato ingenziwa kwiibhanki ze-beige okanye zepinki, ukongeza iirebhoni ze-satin ezimhlophe, umtshato oqoshiwe kunye nemimiselo yomtshato, ukuchithwa kumaphephancwadi athile kunye namaphephandaba, njalo njalo. Ukuze ulungiselele i-albhamu yasekhaya, unokugxila kwisitayela se-Retro. Iifoto zabantwana bakho oomkhulu kunye nogogo baya kukhangeleka xa ubongeza izinto ezibaziweyo zexesha labo kwiphepha.
Okulandelayo kuvela kumzobo odumileyo wokugqithisa. Namhlanje oku akukona nje ukulungiswa komsebenzi, kodwa ubugcisa bonke. Ukuba unomonde, kwaye uthanda uhlobo olunzima lomsebenzi, ke le yinto yokuzilibazisa kuwe. Ukuhlobisa indlu yakho, udale uhlobo oluyingqayizivele lwangaphakathi, kodwa gcwalisa ubomi bakho ngemibala eqaqambileyo eneemifanekiso ezifakwe emnqamlezweni. Ngenxa yale nto awuyidingi nto - umonde kunye neentlobo ezahlukeneyo zomtya, isakhelo sokubhinqa, iifowuni kunye nezicwangciso zokufakela umnqamlezo. Ngenxa yesiphumo semifanekiso, i-silk floss ifanelekileyo. Inhlanhla!
I-hobby eyaziwayo kakhulu ngeli xesha ngumsebenzi wesinwele. Namhlanje, iifayili zeentlobo zithandwa kakhulu. Ubuninzi buqhubekile kumabini asebekhulile nabancinci.
Olunye uhlobo oluthile lokuzilibazisa lubonisa ukubeka umbala kwiilazi okanye ukudala iglasi. Ukukhethwa kwezinto ezinkulu kwiivenkile, kunika amantombazana ithuba lokuzama isandla sabo kule hobby. Xa ufumene upende kwiglasi kunye neendlela ezahlukeneyo, unokwenza uluhlu kwizibuko zakho, kwiiglasi zengcango, kwiiglasi okanye kwiibhotile. Ukwenza oku, kufuneka uqale wenze umzobo, uze uqale ukusebenza.
Umntu wayehlala efuna ukuzonwabisa. Kwaye ngeli xesha, i-hobby ingaba ngumsebenzi wangempela owuthandayo. Olunye umdlalo olulandelayo lunomdaniso we-oriental. Ukudansa kunceda amantombazana nabasetyhini basempumalanga kwaye kungekhona nje ukugcina ubuncinane, ukuguquguquka komfanekiso kunye nokukwazi ukuvelisa ngaphambili, phakathi kwezinye izinto, ukuguga. Ukunyakaza kwemidanso yaseMpumalanga kukuphucula ukujikeleza kwegazi emzimbeni wonke, kubandakanywa nangengqondo, kwaye ungavumeli ukubunjwa kweesitives, ezihlala zichaphazela amabhinqa namadoda ukususela kwiminyaka engama-20-25, ukuba zikhokelela ekudleni ubomi. Kwakhona, imidanso yaseMpuma inokunceda ukuxazulula iingxaki ezininzi kwinkqubo yokuzala isisu, umgudu kunye nexesha lokumisa iinkqubo ezonakalisayo zokuguga emzimbeni.
Ngaphandle koko, le mdaniso inhle kakhulu kwaye iyingqungquthela, kutheni ungadli kumculo omhle waseMpumalanga kunye neentombi zakho okanye phambi kwesibuko imihla ngemihla? Ngoko kutheni unganikeli ixesha lakho elikhululekile kulo mdlalo othakazelisayo onjengomdaniso wesisu.
Kukho olunye uhlobo lokuzilibazisa-lisebenza ngodongwe. Ukuzonwabisa, ngokuqinisekileyo, umtsalane, kodwa umcimbi onomdla kakhulu. Ukusebenza nodongwe kufuna umzamo omkhulu kunye neendleko. Kwaye ukuba ukuphumla kwakho kukuguquka komsebenzi, ngokokuzongamela kombumbi kumntu onomsebenzi wakhe wobugcisa ohambelana noxinzelelo lwentlungu ufanelekile. Kwaye kwenzeka ukuba le nto yokuzonwabisa iya kuba yowesibili, kwaye ekugqibeleni iyona msebenzi ophezulu. Kuhle kakhulu, ukuba ishishini onomdla ngalo lizisa imali.
Ngoku uyazi yonke into malunga nokuzilibazisa okuthandwayo, kuya kuwe, ungathanda ukuthini ukuyenza ngexesha lakho lokuzimela.
Indlela yokubopha iibhere kunye neenaliti zokudibanisa
Isiqalo: izixhobo ezenziwe ngesandla
Indlela yokugubungela i-bedspread embhedeni
Iiprophesti eziphambili zeeprores
Xa iHalloween 2016 ibhiyozelwa: umhla
Indlela yokupheka isidlo esilula nesonelisayo sepatakeki zepatata, zokupheka kunye nezithombe
Umfazi ka-Alexander Kerzhakov wavuka ukuze aphendule, kodwa kamva wasusa isikhundla sakhe kwi-Instagram
Ukusetyenziswa kweoli ye-cajeput
Isaladi "Umoni wesifazane"
Iingcebiso zeengqondo zenziwa ngabazali abanalo ixesha elincinane labantwana
Yintoni igazi eliphuma emlonyeni wakhe eliphuphayo?
Impilo yabasetyhini kunye nobuhle
Izakhiwo ezintsha ezitshabalalayo okanye iindawo zokuzibulala
I-Autumn trends-2015 ukusuka kwimveliso yefashoni: Izambatho
Ukuziphatha komntu emva komhla wokuqala